ကွန်ပျူတာ ထောက်ကူပြု ဒီဇိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ကွန်ပျူတာ ထောက်ကူပြု ဒီဇိုင်း
နှစ်ဖက်မြင်ပုံစံ ကဒ်၏ နမူနာပုံ
သုံးဖက်မြင်ပုံစံ ကဒ်၏ နမူနာပုံ
ကွန်ပျူတာ ထောက်ကူပြု ဒီဇိုင်း (အင်္ဂလိပ်: computer-aided design; CAD) ဆိုသည်မှာ ဒီဇိုင်းပုံစံတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ တီထွင်ဖန်တီးခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ အသေးစိတ်လေ့လာစိစစ်ခြင်း၊ အကျိုးရှိထိရောက်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့၌ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ကွန်ပျူတာများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ကဒ် (သို့) စီအေဒီ (CAD) ဆော့ဖ်ဝဲများကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူ၏ ရေးဆွဲနိုင်အား မြှင့်တင်ရန်၊ ဒီဇိုင်းပုံ၏ အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်၊ (ကွန်ပျူတာ) အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များမှတစ်ဆင့် သတင်းချက်လက် ပေးပို့၊ လက်ခံမှု ကောင်းမွန်စေရန်၊ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အချက်အလက်အစုအဝေးကို ဖန်တီးရန်တို့အတွက် အသုံးပြုကြသည ကဒ်မှတစ်ဆင့် ဖန်တီးသော ဒီဇိုင်းများသည် မူပိုင်ခွင့် လျှောက်ထားမှုများ၌ အသုံးပြုရာတွင် ထုတ်ကုန်နှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုများကို ကာကွယ်ရာ၌ အသုံးဝင်လှသည်။ ကဒ်ကိုသုံး၍ ရေးဆွဲထားမှုများသည် ပရင့်ထုတ်ယူရန်၊ စက်တင်ခုတ်စားရန်၊ အခြားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် များသောအားဖြင့် အီလက်ထရောနစ်ပုံစံများဖြင့် တည်ရှိတတ်သည်။ CADD ဝေါဟာရကိုလည်းအသုံးပြုလေ့ရှိကြကာ အနက်မှာ "ကွန်ပျူတာ ထောက်ကူပြု ဒီဇိုင်းနှင့် ပုံကြမ်း" (computer aided design and drafting) ဖြစ်သည်။
အီလက်ထရောနစ်စနစ်များကို ဒီဇိုင်းပြုရာ၌ သီးသန့်အနေဖြင့် EDA (electronic design automation) ဟုသုံးကြပြီး စက်မှုဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းရေးရာ၌ MDA (computer-aided drafting) (သို့) CAD (computer-aided drafting) ဟု သုံးစွဲကြလေသည်။ စက်မှုဆိုင်ရာ CAD (သို့) MAD တွင် ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲများကို သုံးစွဲ၍ စက်မှုပုံရေးဆွဲခြင်းကို ဖန်တီးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်သည်။
စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းများအတွက် ကဒ်ဆော့ဖ်ဝဲများသည် ဗက်တာအခြေခံ ဂရပ်ဖစ်များကို အသုံးပြုကြ၍ ပုံမှန်ရေးဆွဲထားသော ပုံကြမ်းနှင့်ပတ်သက်သော အရာဝတ္ထုများကို သရုပ်ဖော်ပြရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ထိုကဒ်ဆော့ဖ်ဝဲသည် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့် အရာဝတ္ထု၏ ပုံတစ်ခုလုံးကို ပြသပေးမည့် "လေးထောင့်ကွက်အပြောက် ဂရပ်ဖစ်စနစ် (raster graphics) ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ရိုးရာပုံရေးခြင်းကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဌာန်လောက်သာ ရေးဆွဲသည်ထက် ပိုမိုလေသည်။ စက်မှုနှင့် အင်ဂျင်နီယာ ပုံဆွဲ လက်စွဲကျမ်းအတိုင်း ကဒ်ထုတ်ကုန်များသည် ပစ္စည်းအမျိုးအစား (သတ္တု၊ ပလက်စတစ် စသည်) ၊ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်၊ အတိုင်းအတာ၊ အင်ဂျင်နီယာ (အတိုင်းအတာ)ကွာဟချက် စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ကဒ်ကို နှစ်ဖက်မြင်စနစ်ရှိ မျဉ်းကွေး၊ ပုံသဏ္ဌာန် နှင့် သုံးဖက်မြင်စနစ်ရှိ မျဉ်းကွေး၊ မျက်နှာပြင်၊ ထုပုံ စသည်တို့ကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကဒ်သည် စက်မှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ ၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြလေရာ မော်တော်ယာဉ်၊ သင်္ဘော၊ လေယာဉ်ပျံ စသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ဗိသုကာလုပ်ငန်းများ၊ ခြေတုလက်တု ထုတ်လုပ်ရေး နှင့် များစွာသောလုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် နည်းပညာဆိုင်ရာ လက်စွဲဖော်ပြချက်များ (digital content creation; DCC ဟုလည်းသိကြ) ၊ ကြော်ငြာလုပ်ငန်း၊ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းများတွင် အထူးပြုလုပ်ချက်များအတွက် ကွန်ပျူတာ လှုပ်ရှားမှုများအား ဖန်တီးရန်လည်း ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုကြသေးသည်။ အလွန်ကြီးမားသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အရေးပါမှုများကြောင့် ယခုဆိုလျှင် ကဒ်သည် ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ ဂျီဩမေတြီ (computational geometry) ၊ ကွန်ပျူတာ ဂရပ်ဖစ် (ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ နှစ်မျိုးစလုံး) ၊ discrete differential geometry တို့တွင် သုတေသနအတွက် အဓိကမောင်းနှင်သည် အားတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
အထူးသဖြင့် အရာဝတ္ထုများအတွင် ဂျီဩမေတြီ ပုံစံဇီဇိုင်း (geometric model) ကို ရံခါ၌ "ကွန်ပျူတာ ထောက်ကူပြု ဂျီဩမေတြီ ဒီဇိုင်း" (computer-aided geometric design; CAGD) ဟု ခေါ်ဆိုလေ့ရှိကြသည်။
↑ Narayan၊ K. Lalit (2008)။ Computer Aided Design and Manufacturing။ New Delhi: Prentice Hall of India။ p. 3။ ISBN 978-8120333420။
↑ Narayan၊ K. Lalit (2008)။ Computer Aided Design and Manufacturing။ New Delhi: Prentice Hall of India။ p. 4။ ISBN 978-8120333420။
↑ Duggal၊ Vijay (2000)။ Cadd Primer: A General Guide to Computer Aided Design and Drafting-Cadd, CAD။ Mailmax Pub။ ISBN 978-0962916595။
↑ Madsen၊ David A. (2012)။ Engineering Drawing & Design။ Clifton Park, NY: Delmar။ p. 10။ ISBN 978-1111309572။
↑ Farin, Gerald; Hoschek, Josef; Kim, Myung-Soo (2002)။ Handbook of computer aided geometric design [electronic resource]။ Elsevier။ ISBN 978-0-444-51104-1။
↑ Pottmann, H.; Brell-Cokcan, S. and Wallner, J. (2007) "Discrete surfaces for architectural design" Archived 2009-08-12 at the Wayback Machine., pp. 213–234 in Curve and Surface Design, Patrick Chenin, Tom Lyche and Larry L. Schumaker (eds.), Nashboro Press, ISBN 978-0-9728482-7-5.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွန်ပျူတာ_ထောက်ကူပြု_ဒီဇိုင်း&oldid=672309" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၇:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။